Samy nankalaza ny isan-tokantrano: nanana ny lanjany ny taom-baovao malagasy | NewsMada
Samy nankalaza ny isan-tokantrano: nanana ny lanjany ny taom-baovao malagasy
Tsy nisy ny famoriam-bahoaka… Samy nankalaza isan-tokantranony kosa anefa ireo mpandala ny taom-baovao malagasy, omaly…
Ny 24 marsa hifoha 25 marsa no nankalazana ny taom-baovao malagasy. Na efa nivonona ho amin’izany aza ny isam-batan’olona, ny isam-bohitra, ny isam-pianakaviana, tsy nisy ny fiarahana maro noho ny fisian’ny valanaretina Coronavirus sy ho fanajana ny fepetra ampiharina miaraka amin’izany, eto amin’ny firenena. Ho setrin’izay kosa, ny isan-trano mihitsy no nankalaza izany ka namerina niaina indray ireo fomba amam-panao natao fahiny. Anisan’izany ny fitondrana arendrina, ny fandrehetana afotsimaty, ny fafy rano, ny tatao, sns. Tamin’ny ankapobeny, teo an-tokotany sy tao an-trano ny nanatanterahana ireo.
Na tsy nisy aza ilay fiarahana tao anaty kianja na faritra lehibe tahaka ny nahazatra hatramin’izany, ny isan-trano mihitsy no zary nanome lanja ny taom-baovao malagasy satria samy niezaka nandalina sy nikaroka ny maha Malagasy azy ny tsirairay. Namakafaka ny hevi-dalina fonosin’ireo fomba atao mandritra ny vanim-potoana ankalazana ny taom-baovao malagasy.
Fikarohana sy fianarana
Anisan’ny nanao ezaka lehibe tamin’ny fikarohana sy ny fianarana ary ny fandalinana momba ireny fomba ireny ny raiamandreny satria ry zareo no niantefan’ny fanontaniana maro avy any amin’ny ankizy. Tsetsatsetsa tsy aritra ny ilazana fa mbola liana amin’ny fomba amam-panaony ny taranaka malagasy, saingy mbola olana hatramin’izao ny tsy fahampian’ny raiamandreny hampita izany amin-dry zareo. Olana mila itadiavam-bahaolana haingana!